Miisaaniyada DF oo laga dooday
24 Dec 24, 2012 - 5:45:25 AM
Xubnaha Baarlamaanka DF ayaa ka dooday maanta [Dec 24, 2012] Miisaaniyada ay ku shaqeynayso 2013, iyadoo xildhibaanadu ay fikrado kala duwan kasoo jeediyeen kulanka oo ugu dambeyn kusoo xirmay buuq ka dhashay habka loo isticmaalayo Miisaaniyada.
Mudanayaal kulanka ka hadlay ayaa sheegay in Miisaaniyada aysan ahayn mid si cad u faahfaahsan, waxayna codsadeen in dib loogu laabto, halka kuwo kalena ay dalbadeen in isla kulanka lagu ansixiyo.
Meelaha ay Xildhibaanadu aadka uga doodeen ayaa waxaa ka mid ahaa lacagta ku baxaysa xafiisyada madaxda dowlada oo ka badan $12 million, iyagoo dalbaday in lacagtaas la yareeyo loona isticmaalo dhinaca sugida amaanka.
Wasiirka Maaliyada DF Maxamuud Xasan Saleebaan oo kulanka ka hadlay ayaa sheegay in Miisaaniyadu ay tahay mid la jaan-gooyay looguna talogalay in wax looga qabto min Koonfurta Gaalkacyo illaa Jubooyinka.
Hadalka wasiirka kadib ayuu xoogeystay buuqa Xildhibaanada waxaana inta badan Xildhibaanadu ay ku doodayeen inaysan Miisaaniyada ku cadeyn Mushaaraadka la siinayo ciidamada DF ee dagaalka kula jira Al-shabaab.
Miisaaniyada ay Xukuuumada DF ku shaqeynayso halka sano ee soo socda ayuu cadadkeedu ka badan yahay $103 Million, iyadoo mudanayaashii kulanka goobjooga ka ahaa ay u muuqdeen kuwo dhaliilsan habka loosoo diyaariyay Misaaniyada.
Fadhiga oo ay soo xaadireen 156 Mudane ayaa isku bedelay buuq iyo xildhibaanadu ay is-afla-gaadeeyaan, iyadoo uu markiiba kulanka soo xiray Gudoomiye ku xigeenka Baarlamaanka isagoo dalbaday in Beri la isku soo laabto.